Maanta marxaladda shabakada waa mid isbedeleysa. Noocyo kala duwan oo cusub oo cusub ayaa imanaya, sida SDN iyo dariiqa isbedelaya habka shabakada ayaa loo naqshadeeyey labaatankii sano ee hore. Si kastaba ha noqotee, Cisco waxay ku taallay heerka ugu sareeya ee cayaarta shabakadaha qaar, sanado badan. Tani si khaas ah ma ahan mid tan lagu dabaqo is-beddelka wajigaaga iyo jihada aasaasiga ah, marka lagu daro horumarin kala duwan oo kala duwan sida xogta diiradda iyo dadaalka wadajirka ah. 80% shabakadaha aduunka iyo internetka ayaa ku shaqeynaya Cisco. Waa marwalba si weyn looga faa'iidaysto horjoogaha warshadaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah hubinta shabakad aan caadi aheyn, hase ahaatee CCNA Amniga ayaa aheyd midka ugu sarreeya ee cayaarta (aqoonsiga IT) muddo dheer, waqti dheer. Iyadoo aan loo eegin suurtogalnimada inaadan dabayshu isticmaalin isticmaalka qalabka cisco, adigoo u jeestay CCNA waxaad ku dhisi doontaa aasaas adag oo ah fikrado isku xiran oo laga bilaabo marxaladda ugu horreysa.
Tilmaamaha Shahaadada Badbaadada CCNA
Qaybaha waxbarashada ee CCNA
Qodobada xiisaha ee Shahaadada CCNA
Cisco Certified Network Associate (CCNA) waa mid taagan oo ka mid ah shahaadooyinka ugu muhiimsan ee IT-ga ee maanta. Xogta ayaa muujinaysa in 1 million lagu ansixiyay CCNA sidii la siiyey tan iyo markii 1998, markii ugu horreysay ay soo baxday. CCNA ma aha oo kaliya faa'iido u leh shaqaaleysiinta iyo codsadayaasha IT-da, oo intaa u ah maamulayaasha. Sida cad, shahaadada ammaanka CCNA waxay leedahay qodobo xiiso badan. Iyada oo ay jirto habka loo helo helitaanka shahaadadan tiro badan oo ah khabiiro IT-ga ayaa beddelay noloshooda waxaana ay ku guuleysteen faa'iidooyin yar. Waxaa jiray tusaalooyin ay ku takhasusay IT-da xitaa markaad shaqaynaysay muddo dheer waxay dareemeen baahida loo qabo in la qaado aqoonsiyada CCNA.
Tababarka ammaanka CCNA wuxuu ka caawiyaa bixinta xogta fahamka iyo tababarka si ay u awoodaan inay hubiyaan, u diyaariyaan, iyo baaritaanka asaasiga ah ee Cisco WLAN ee ganacsiga yaryar iyo dhexdhexaadka ah (SMB) iyo in lagu dadaalo shabakadaha. Waxay ka caawisaa rajada ah in la dhiso fikradaha iyo arimaha la xariira xiriirka LAN / WAN. Nidaamyo kala duwan oo ay ku jiraan IP, IGRP, wareejinta muuqaalka, CLANs, Ethernet, Serial, IP RIP, RIP, liisaska galalka, iyo wixii la mid ah ayaa sidoo kale lagu daray koorsada shahaadadan. Qaado mid ka mid ah koorsooyinka, kaas oo kuu diyaarin doona inaad u guurto beeraha cagaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaad gashid shirkad malaayiin dollar ah iyo ururo 500. Waa nooca takhasuska ah ee kaa saari doona shaqada caadiga ah ee IT.
Tababbarka qaabka Cisco waa mid taagan oo ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee caalamka iyo dhagax saameeyn leh oo loogu talagalay shaqsiyaadka leh ujeeddooyinka Silicon Valley. Macluumaadka is-weydaarsiga koorsada isku-xiran ee dhexda kuugu dhow oo aad u sii sheegto xirfad-shaqeedkaada si aad u hesho natiijooyin cusub.
Shahaadada CCNA waa astaanta ama caddaynta heerka qaybta ee shahaadada Cisco CCIE. Raadinta ka dib shahaadaynta Cisco CCNA ayaa kaa caawin doonta inaad ku guuleysatid dhibcahaaga xirfadeed oo aad ku gaarto meelaha aadka u muhiimsan. Hoosudhaca hoos ku qoran ayaa ah wax yar oo ka mid ah faa'iidooyinka dhabta ah ee raadinaya Kooras CCNA ka dib, fiirso -
Waxaad filan kartaa in aad fuulaysid shaqadaada oo aad bixiso ururkaaga hadda.
Adiga oo aan wax badan ka beddeleynin gawaarida ganacsi oo codsanaya fuulitaanka mushaharka.
CCNA waxaa loo arkaa meel kasta oo adduunka ah, taas oo sheegaysa inaad awoodi kartid adigoon wadan dhul badan oo ah meel bannaan.
Maqnaanshaha isku-kalsoonaanta ee CCNA waa imtixaanka IT-da ee ugu adag.
Koorsada shahaadada CCNA waxay dejinaysaa suurtagalnimada shaqooyinka kala duwan ee shabakadaha. Si kastaba ha ahaatee, kuwan tartamayaasha ah ayaa sidoo kale si fiican loogu ogaan doonaa degaanka Cisco ee furaha iyo furayaasha. Takhasusayaasha Cisco waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay awood u yeeshaan in ay toosiyaan iyo fuliyaan isku xirnaanta meelaha fogfog ee ku sii socota WAN. Waxaa intaa sii dheer in la cusbooneysiiyo macluumaad muhiim ah sida arrimaha amniga shabakada, isku xirka kombuyuutarka fog iyo awoodaha kale ee PC.
Diiwaangelinta cadaynta shahaadadaada CCNA, waxaad u qalantaa qaybo shaqo oo kala duwan. Hooska hoose waa diiwaanadaada caadiga ah ee shaqadaada-
Si kastaba ha ahaatee, faa'iido kale oo ka mid ah koorsada CCNA waa in shuruudaha aqooneed ee loo baahan yahay kaliya inay tagaan heerka 10 + 2. Laba daqiiqo ka dib ayaa ka soo baxa shakhsiyaadka leh dhiirrigelin ku filan oo ku saabsan ururka ururada qaabdhismeedka iyo shabakada waxay raadin karaan CCNA-ka iyadoon awoodin shahaadada. Sidoo kale, rajada mustaqbalka ee rajada waxaa lagu kordhin doonaa koorsada shahaadadan. Sidaa oo kale, CCNA waa awooda lagama maarmaanka u ah inay raadiso koorasyo ​​shahaadooyin kala duwan oo Cisco ah oo ay ku jiraan CCIE. Dadka ku jira ganacsiga oo waxay u baahan yihiin shahaadada LAN / WAN sidoo kale waxay qaadanayaan koorsadan taas oo ka caawin doonta inay xisaabtamaan.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad tahay bilawga dambe ama aad u soo guurto xirfad, warshadaha isgaadhsiintu waxay bixiyaan dhulal ballaadhan oo loogu talagalay horumarinta xirfadda. Weli waxoogaa horumar ah oo horumar ah, oo ay ku jiraan kuwa ururada iyo dawladaha. Mid kasta oo ka mid ah shabakadaha waxay u baahan yihiin shakhsiyaadka uqalma inay maamulaan hawlaha shabakada iyo ammaanka Wershadaha Shabakadda waxay leeyihiin dhamaan habab badan, waxaana intaa dheer in ay CCNA xaqiijinayaan inay ku siinayaan buuxinta iyo mahadnaqida xirfaddaada IT.
Solutions Technologies Innovativewaa bixiyaha waxbarashada IT-ga ee ururada ugu sarreeya. Waxay u sheegtaa khabiirada inay soo afjaraan nidaamyada wax soo-saarka ee isku-xirka iyo kala duwanaanta kala duwan. Waxay bixiyaan tababar cajiib ah CCNA shirkadaha.